LPIC1-101 OpenWebinars Course | Kubva kuLinux
Chengetedza ruzivo rwako Linux gore risati rapera.
Waizviziva here kuti zuva rega rega makambani mazhinji anotangisa mabasa anopa kwavanoda nyanzvi dzeLinux? Pasina kupokana, ino ndiyo nguva yekusimbisa ruzivo rwako uye shamwari dze Vhura Webinars tibatsire kuzviita.
Zuva rinotevera 4 of noviembre tanga chinyorwa chekupedzisira chegore ra yekugadzirira kosi ye LPIC1 - bvunzo 101. Mazana evadzidzi vakatowana zvinangwa zvavo nekuda kweiyi kosi uye nyanzvi inoidzidzisa, Antonio Sanchez.
Iyo kosi fomati ndiyo yakajairwa iyi papuratifomu, uye iyo iri kubudirira zvakanyanya, iri online kosi ine mhenyu makirasi uko iwe kwaunogona kubvunza yako yese mibvunzo kune mudzidzisi munguva chaiyo nguva. Uye zvakare, ese makirasi akanyorwa kuti akwanise kuvaona riinhi uye zvakadii zvaunoda. Uye kana izvo zvaive zvisina kukwana, vakaisawo patiri chiverengero chakasekesa bvunzo chaidzo dzekunyanyisa kugadzirira. Pano tinokusiya iwe link kune a video paunogona kuona kuti makirasi anovandudzwa sei.
Izvi zvese zvinonzwika sezvakanaka kare, asi ko kana tikakuudza kuti isu tine kodhi yekubvisa yevateveri vedu vese? Zvakanaka hongu, ikozvino unogona kutora kosi ne 20% dhisikaundi !! Iwe unongofanirwa kushandisa kodhi Kubva kuna DELINUX1115 kuti ubatsirwe nemutengo.
Kana iwe uchishanda mukambani yeSpanish, unogona kutora kosi iyi pasina muripo nekuda kwezvikwereti zvekudzidzisa kubva kuTripartite Foundation. Ivo vanokuzivisa iwe uye vanogadzirisa ese maitiro kuitira kuti iwe usazonetseke nezve chero chinhu.
Muchidimbu, tinokurudzira kuti usarasikirwa nemukana uno uye usimbise ruzivo rwako rweLinux nekukurumidza sezvinobvira kunyorera mabasa matsva kana kusimudzira basa rako rehunyanzvi ne yekugadzirira kosi ye LPIC1 Bvunzo 101.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » LPIC1-101 OpenWebinars Course
Ndinoda kuziva zvakawanda nezve iyo kosi, mutengo, uye kana iri online
Víctor Humanes - OpenWebinars Chikwata akadaro
Ehe, iyo kosi iri pamhepo nemakirasi ehupenyu uye kubvunzana nemudzidzisi munguva chaiyo.
Mune zvinongedzo zveiyo posvo iwe unokwanisa kuwana kune iyo yese iyo info. Kana iwe uchida chero chimwe chinhu iwe unogona kutinyorera isu zvakananga, ndatenda.
Pindura Víctor Humanes - OpenWebinars Chikwata